Ungasikhulula kanjani isikhala sokugcina ku-Android | Izindaba zamagajethi
Izindlela eziyisikhombisa zokukhulula isikhala sokugcina ku-Android
AmaVillamandos | | Android, AmaSelula, Tablets
Ingxenye enkulu yama-smartphones afinyelela emakethe ngohlelo lokusebenza lwe-Android enza kanjalo ngesikhala sangaphakathi sokugcina esingu-16 GB noma ngaphezulu. Lokhu kuqinisekisa ukuthi izinkinga zesitoreji zihamba ngohlangothi, yize ngeshwa zisekhona ama-terminals asinikeza kuphela i-8 GB yesitoreji sangaphakathi nezinkinga ezingapheli yabo bonke labo abawutholayo.
Nami bekumele ngihlushwe yilezi zinkinga ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngoba ngithole ithuba lokuhlola enye yama-Smartphones athandwa kakhulu emakethe, nokho enikeza kuphela umsebenzisi ongu-8 GB wesitoreji, okutholakala kuphela ukuthi usetshenziswe. " ", isigamu. Ngenxa yezinkinga eziningi obekufanele ngibhekane nazo ezinsukwini ezimbalwa nginqume ukubhala kule ndatshana lapho ngikukhombisa khona uchungechunge lwe amathiphu amahle wokukhulula isikhala sokugcina.
Uma ngabe ubungazi, kuyadingeka ukuthi ufunde lawa macebiso alandelayo bese uwasebenzisa njengoba amadivayisi amaningi, lapho engenayo indawo eyanele yokugcina yangaphakathi, ungavumeli ukwenza izinqubo ezithile, ezilula njengokuthumela nokuthola i-SMS noma ukufaka izinhlelo zokusebenza ezintsha ezilandwe esitolo esisemthethweni se-Google noma iyiphi i-Google Play efanayo.
Uma unedivayisi noma ithebhulethi ephathekayo ene-Android operating system, khipha iphepha nepensela ngoba kule ndatshana uzothola ifayela le- Isixazululo ezinkingeni ohlupheka ngazo nsuku zonke ngesitoreji sangaphakathi esilinganiselwe onayo esigungwini sakho.
1 Khipha izinhlelo zokusebenza
2 Khubaza izinhlelo zokusebenza ongazisebenzisi
3 Sula inqolobane
4 Susa amafayela noma imibhalo oyilandile
5 Susa izithombe, amavidiyo nokunye okuqukethwe kwe-multimedia
6 Sebenzisa insizakalo yefu
7 Qiniseka ukuthi idivayisi yakho ayinayo i-microSD slot
Iseluleko sokuqala sokukhulula isikhala sokugcina kudivayisi yethu ye-Android silula futhi asikho esinye ngaphandle kwalesi se- khipha izinhlelo esingasazisebenzisi. Futhi singakhipha izinhlelo esinezimpinda futhi senza ngazo izinto ezifanayo kakhulu.
Ukukhipha uhlelo lokusebenza kufanele nje uye kuzilungiselelo futhi lapho lapho ukhethe inketho Phatha izinhlelo zokusebenza. Qaphela ukuthi yini oyikhiphayo ngoba ungangena enkingeni enkulu cishe unganakile.
Khubaza izinhlelo zokusebenza ongazisebenzisi
Njengoba usuvele wazi, ezinye izinhlelo zokusebenza zifakiwe kanye nohlelo lokusebenza ngakho-ke azikwazi ukukhishwa ngokulandela indlela ejwayelekile. Noma kunjalo, esingakwenza ngazo zonke izinhlelo zokusebenza kubakhubaze, okuzobenza bangazisebenzisi izinsiza zohlelo nokuthi bakwindawo yethu yokugcina abanesikhala esincane Kungenzeka ngoba ukuzikhubaza futhi kukhipha zonke izibuyekezo ezifakiwe.
Uma ungeke usebenzise noma yiziphi izinhlelo zokusebenza ezifakwe ngokwendabuko ohlelweni, zikhubaze ukuze zisebenzise isikhala esincane futhi zingasebenzisi izinsiza zanoma yiluphi uhlobo.
Ukusula inqolobane yinto embalwa kakhulu kithi eyenza kaningi, kepha lokho ivumela ukukhulula isikhala esikhulu sokugcina kumadivayisi wethu.
Ukusula lolu hlobo lwememori kusho ukususa yonke idatha egciniwe yezinhlelo zokusebenza ezifakiwe noma imidlalo.
Ngokwenguqulo 4.2 yesistimu yokusebenza ye-Android, noma imuphi umsebenzisi angasula inqolobane kuzilungiselelo bese ethola inketho yesitoreji, ukuze ekugcineni achofoze kudatha efakwe kunqolobane
Ukukhulula lolu hlobo lwememori kungenzeka futhi ukuthi uphendukele kuzinhlelo zokusebenza ezidume kakhulu njenge Hlanza inkosi o CCleanerYize ukuncoma kwethu uma sinesikhala esincane akukhona ukufaka izinhlelo eziningi kudivayisi yethu.
Susa amafayela noma imibhalo oyilandile
Ezikhathini eziningi sisebenzisa umakhalekhukhwini wethu ukulanda amadokhumende, phakathi kwawo okungaba, isibonelo, ama-invoyisi, amarisidi asebhange noma olunye uhlobo lombhalo. Vele lezi zithatha isikhala kwimemori yangaphakathi yedivayisi ngakho-ke kunconywa kakhulu ukuthi uma sekubukwe futhi kwahlaziywa uzisuse.
Uma ungazisusi njengoba uzilanda, ungahlala uzisusa ngasikhathi sinye kusuka kuhlelo lokusebenza lokulanda. Uma ungawasusanga amadokhumenti owalanda isikhathi eside, ungathatha injabulo enhle, ngesimo sesikhala, lapho ulungiselela ukususa amafayela.
Susa izithombe, amavidiyo nokunye okuqukethwe kwe-multimedia
Zonke lezo zithombe ozibamba emoyeni, ezifiphalisiwe noma oziphindaphindile zithatha isikhala futhi iningi lethu linazo ngazishumi nambili emabhalweni ethu. Uma isikhala sesitoreji sedivayisi yakho sisemkhawulweni Hlala emuva uqale ukususa zonke lezo zithombe, amavidiyo, izingoma namanye amafayela ongafuni noma osebenzisekayo noma ophindile.
Kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezifuna izithombe eziphindiwe noma ezingasebenzi, kepha futhi futhi isincomo sethu, njengoba sinesikhala esincane kakhulu, ukuthi ungafaki ezinye izinhlelo ezizosebenzisa isikhala sokugcina ngendlela engenamsebenzi.
Sebenzisa insizakalo yefu
Izinsizakalo eziningi zokugcina ifu zisinikeza ama-gigabytes amaningi, ukugcina zonke izithombe zethu noma cishe noma yini esiyifunayo, mahhala ngokuphelele noma ngentengo ephansi kakhulu.
Ukulayisha izithombe zethu kwenye yalezi zinsizakalo kusivumela ukuthi sikhulule isikhala esikhulu sokugcina kudivayisi yethu, kodwa futhi sikwazi ukuvikelwa uma, ngokwesibonelo, i-smartphone yethu ilahlekile noma intshontshiwe ngoba zonke izithombe zethu zizobe ziphephile.
Qiniseka ukuthi idivayisi yakho ayinayo i-microSD slot
Kungabukeka kuyisilima, kepha uma ngikubekile kule ndatshana kungenxa yokuthi abasebenzisi abangaphezu koyedwa, kufaka phakathi nami, sibe nezinkinga eziningi ngokugcinwa kwangaphakathi kwedivayisi yethu size sabona ukuthi leyo nto eseceleni ISIM khadi eyokufaka ikhadi le-microSD.
Ngenxa yalokho Qiniseka njalo ngaphambi kokudweba ezinye izinhlelo uma ngabe idivaysi inethuba lokukhulisa isitoreji sangaphakathi ngelinye lala makhadi, elizosikhipha ezinkingeni ezingaphezu kweyodwa futhi elingathengwa ngama-euro ambalwa.
Lezi ngezinye zezeluleko okufanele zikwazi ukukhulula isikhala sokugcina kudivayisi yethu nokuthi kufanele usisebenzise, ​​ngokombono wethu, noma ngabe unesikhala esincane noma esiningi futhi lokho kungukuthi izithombe eziphindaphindwayo noma amafayela angenamsebenzi ungakhonzi muntu.
Yiziphi izinqubo noma izinhlelo ozisebenzisayo ukukhulula isikhala sokugcina sangaphakathi kudivayisi yakho?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izindlela eziyisikhombisa zokukhulula isikhala sokugcina ku-Android
Enye indlela elula .. Ulahla ifoni kudoti bese uthenga i-iPhone ene- "hard drive" futhi enganciphisi ijubane.
Vele, ungahlala ufake i-microsd ku-iphone noma ukhiphe ibhethri uma ishayisa …… .. Cha…. ongeke ukwazi
Kepha njengoba ama-iPhones ayabiza futhi awaze avinjwe….
Yeka indlela abanciphisa ngayo ijubane uthi ...
Kunezinhlelo zokusebenza zokusisiza ukukhulula isikhala, ngisebenzisa lena futhi kuhle impela
Lawa wonke ama-smartphones e-Nexus esikwazile ukuwajabulela kuze kube manje
Ukubuyekezwa komzila wemodemu we-TP-Link Archer D5